Mifanohitra Plane Train Travel Travel - izay tsara indrindra? | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Mifanohitra Plane Train Travel Travel - izay tsara indrindra?
(Last Nohavaozina: 27/03/2021)
Misy fomba maro azo ankehitriny ny fitaterana noho ny mandeha manodidina Eoropa, fa ny fiaran-dalamby mandeha oharina amin'ny fiaramanidina mandeha no tena mahaliana iray.
Na izany aza, izay fomba fitaterana no tsara indrindra? amin'ny Save A Train, dia mazava ho azy isika ary mihevitra fa mitongilana fiaran-dalamby mandeha dia amin'ny alalan'ny lavitra ny manam- karazana fitaterana! Vakio etsy ambany raha te hahalala izay tsara kokoa ary avelao isika hiroboka ao amin'ny lahatsoratray momba ny dia lavitra amin'ny dia lavitra.
Air Travel ankehitriny fantatra toy ny haingana indrindra-mitombo mpandray anjara amin'ny fiakaran'ny mari-panan'ny. Fanalavirana fiaramanidina rehefa misy mora fomba hafa mba handeha dia mety ho ny lehibe indrindra na inona na inona fa ny olona atao mba hanapaka ny carbone dian-tongotra. Fahalotoan'ny rivotra dia mihena be amin'ny alalan'ny fanaovana ny lamasinina nandritra ny fiaramanidina. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena Eoropeana, fiaran-dalamby tambajotra ny be sy ny tolotra dia matetika, mba hahafahanao ho mpitety Eco-namana tsy misy sorona.
Foggia an'i Bari Lamasinina
Florence an'i Bari Lamasinina
Naples any Bari Lamasinina
Roma ho Bari Lamasinina
Ny manovaova ny fiarandalamby mandeha oharina amin'ny fiaramanidina Tsidika
Nandeha fiaramanidina matetika midika hoe tsy maintsy hiarovana ny seza herinandro, na volana, mialoha mba hahazoana ny antonony saran-dalana.
Raha vao efa antoka ny seza, fa tsy mora ny hanova ny sidina nefa tsy voatery mandoa sarany lehibe.
Na dia misy fiaran-dalamby mitaky anao hanao seza famandrihana mialoha, be dia be kokoa ny manovaova, indrindra raha toa ka mila manova ny fotoana tianao dia lavitra.
Ary amin'ny Save A Train na dia ny vidin'ny tapakila ny mampisavoana, dia handefa anareo fantatrao sy hanampy anao hifanakalo ny tapakila amin'ny vidiny mora vidy kokoa!
Tsy misy tabataba
sary an-tsaina naka dia lavitra Ary raha tsy tonga adiny roa tany am-boalohany, miandry amin'ny fiarovana ela tsipika, ohatra avy amin'ny ranon-javatra sy ny gels, na esory ny kiraro ho an'ny maso. Tongasoa eto amin'izao tontolo izao ny fiarandalamby mandeha. Rehefa mandeha amin'ny rivotra, fotoana bebe kokoa sy ny fiarovana fepetra ilaina. Mandeha ny rail matetika midika hoe afaka tonga 30 minitra mialoha ny fotoana sy mandeha mahitsy ny sehatra tsy misy manahirana, ary tsy ilaina ny jereo ao amin'ny valizy, ka nanolotra anao izahay eto amin'ny teboka lehibe iray hafa ny mandeha lamasinina oharina amin'ny fiaramanidina Tsidika, toerana ny fiaran-dalamby mandeha mandresy!
Train oharina amin'ny Plane Tsidika Tsidika, Speed ​​- haingana isan-trano
Air Travel dia fantatra ho iray amin'ireo fomba haingana indrindra hahatratra ny toerana halehany, na izany aza, izany dia afa-mandray ny fiaramanidina mihitsy ho fiheverana. Ahoana lavitra mialoha ny fiaramanidina no tsy maintsy tonga mba hiampita ny lava maso-in sy ny fiarovana tsipika? Raha efa nanoratra tao anaty kitapo ianao dia tsy maintsy miandry ny manangona izany rehefa tonga - mandany fotoana be izao. Tsy toy ny seranam-piaramanidina, amin'ny gara tsy misy maso-ins na fiarovana andalana, ka tsy voatery ho amin'ny gara ora alohan'ny diany. Most lehibe gara dia hita tsara ao am-pon'ny amin'ny tanàna koa dia manompo. Ny ankamaroany rehefa mandray ny fiaran-dalamby, ianao tonga mivantana eo amin'ny toerana halehany. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, ianao no afaka manokana ora maro ary mahazo ny avy any amin'ny seranam-piaramanidina.
Lyon any London Lamasinina
Tao anatin'ny folo taona, fiaran-dalamby mandeha Lasa manintona kokoa ny teti-bola-mahatsiaro tena mpandeha. Na dia nandray fiaramanidina ho any ny toerana halehany dia mbola fomba mahomby mba hahatratra ny tanjona, misy fanampiny vola lany izay isika dia mazana no tsy mety tafiditra ao. Rehefa eo ny fomba fitaterana, tsy maintsy hametraka ao amin'ny fanampiny mahazo ny vidin'ny sy avy any amin'ny seranam-piaramanidina. Izany na mitaky ny vidin'ny solika sy ny fiantsonan'ny, na ny fiara fitateram-bahoaka na fiarakaretsaka seranam-piaramanidina saran-dalana. Tsy misy izay mora vidy.
Munich ho Potsdam Lamasinina
Hamburg ho Potsdam Lamasinina
Hanover ho Potsdam Lamasinina
Frankfurt ho Potsdam Lamasinina
Raha tsy efa nandoa ho an'ny fandraharahana kilasy, ny toerana dia matetika voafetra amin'ny fiaramanidina seza. On ny fiaran-dalamby, dia afaka mihetsika kokoa malalaka, dia ho bebe kokoa ny toerana manodidina legroom. Mandritra ny sidina, tsy maintsy miandry ny fehikibo miaro amin'ny loza famantarana mba hiverina ho any hifindra avy amin'ny seza. Na izany aza, eo amin'ny fiaran-dalamby anao hifindra nidina ny aisles, hangorona ny kaikitra, na fanaovana kafe, ary mijery izao tontolo izao mandalo. A Toerana mahafinaritra mitaingina fiaran-dalamby Mety ho fety mihitsy aza. Eoropa indrindra maimaim-poana ihany koa ny fiaran-dalamby Wifi - zavatra izay tsy mbola nilaza rehetra airlines.
Train mandeha koa dia mamela anao mandeha aina amin'ny niankohoka biby. maro ny biby fiompy tsy mety ny mandeha fiaramanidina noho ny ara-pahasalamana, TAONA, na miteraka.
mpandeha amin'ny Eoropa fiarandalamby Mety ho alika, saka, sy ny hafa biby kely miaraka amin'izy ireo ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana tsy misy sarany fanampiny!
Mandray ireo lafin-javatra rehetra ho fiheverana, dia mora ny mahita ny fomba mandeha lamasinina hatrany dia lasa natanjaka indrindra amin'izao fotoana izao. Fiaramanidina dia mety mba anao tany lavitra. Na izany aza, raha mandeha manodidina Eoropa na amin'ny faritra hafa amin'ny lalamby tsara fitaterana, fiaran-dalamby mandeha no mahomby kokoa sy mampahazo aina fomba fitaterana.
Frankfurt ho Salzburg Lamasinina
Berlin ho Salzburg Lamasinina
Cologne ho Salzburg Lamasinina
Dresden ho Salzburg Lamasinina
Koa ankehitriny fa namarana ny mpandresy tamin'ny fiaran-dalamby mandeha oharina amin'ny fiaramanidina Tsidika, Mba hahitana ny tsara indrindra saran fiaran-dalamby any Eoropa, fitsidihana Save A Train.
Raha mila fanazavana fanampiny, Follow Save A Train on Facebook, Instagram Account, ary Twitter Kaonty.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / andehilahy ny / nl na / fiteny azy sy ny maro hafa.
airplanetravel planetravel Train Travel
Nahoana no Channel Tionelin'i zava-dehibe ho Eoropa?
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel UK, Travel Europe
Torohevitra tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana raha bevohoka ianao